ရုရှား - ယူကရိန်းပ conflict ိပက္ခသည်ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံးဒုက္ခသည်ပြူရီယစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုယခုရာစုနှစ်အတွင်း၌ဒုက္ခသည်များနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများသို့ဒုက္ခသည်များစွာပို့နေသည့်အခြေအနေများသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ အမျိုးသားအာဏာပိုင်များကဤဒုက္ခသည်များ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ည့်ခံခြင်း, နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်တာ0န်ယူနေကြသည်။
လူသိများသောစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် Meetion အမှတ်တံဆိပ်သည်အောက်ပါအထောက်အပံ့ပေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1. ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဖြန့်ချိသူများကိုဒုက္ခသည်များအားသူတို့၏စွမ်းရည်တွင်အကူအညီများပေးနိုင်ရန်အတွက် Meetion အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးသူများအားဖုန်းဆက်ပါ။
2. တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုင်ထားသူများကို0ယ်ယူသူများကိုဈေးမှရောင်းချရန်အစည်းအဝေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးသူများအားမေးမြန်းပါ။
(3) ဒုက္ခသည်များကိုကူညီရန်ကူညီပေးခဲ့သူများသည်တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့များသည်အစည်းအဝေးအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သီးသန့်အခွင့်အရေးများကိုနှစ်သက်ကြသည်။
4. Social Media မှတစ်ဆင့်ဒုက္ခသည်များအားကူညီရန်အစည်းအဝေးများပိုမိုများပြားလာစေရန်အစည်းအဝေးများပိုမိုအားပေးရန်အစည်းအဝေးများဖွင့်ဟိတ်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုခေါ်ပါ။
5. အစည်းအဝေးများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာများကိုစုဆောင်းရန်စည်းစိမ်ဥစ္စာစုဆောင်းရန်နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာစုဆောင်းရန်အပြည့်အဝထောက်ခံသည့် Brugee သူငယ်ချင်းများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်။
မတ်လ 4, 2022